RHA T10, famakafakana ireo headphones RHA vaovao | Androidsis
RHAReid Heath Audio dia mpamorona headphone an-tsofina anglisy. Ny kalitaon'ny vokariny avo lenta dia mahatonga an'i RHA ho filokana azo antoka raha mitady headphones misy kalitao sy maharitra ianao.
Tamin'ny fotoana nanananay fotoana fandinihana headphones RHA 750, vokatra iray izay nahatonga anay hanana fahatsapana lehibe. Ary izao dia fotoana hampisehoana aminao ny tsiambaratelo rehetra an'ny RHA T10 amin'ny famakafakana feno.
1 RHA T10, endrika tsy lavorary sy kalitao
2 Eny ary, ny RHA T10 dia manana endrika tsy lavorary ary tena mahazo aina amin'ny fampiasana azy, saingy ahoana ny fandehany?
3 Tombontsoa sy lafy ratsy
RHA T10, endrika tsy lavorary sy kalitao
Alohan'ny hiresahana ny famolavolana dia tiako ny manasongadina ny vokatra. Ary, na dia tsy headphones mora vidy aza ny RHA T10, ny vidiny ofisialy dia 169 euro, ny marina dia izay ny fonosana tonga ao an-tranonao dia tena tsy nampoizina.
Ary tsy hoe tonga fotsiny ny headphone T10 fa miaraka amin'izy ireo misy fitoeran-javatra mitondra, 10 andian-pad padisy fahatsiarovana ary busa misy habe samihafa mba hahafahantsika manamboatra ny écouteur arakaraka ny haben'ny sofinay, namboarina tamina takelaka borosy vita amin'ny alim-pito sy azo ampiharina, ary koa ny sivana roa tsiroaroa hampanjifaina ny headphones arak'izay mozika tiana henoina .
Raha miverina amin'ny famolavolana ny headphones RHA T10i dia tsy maintsy ekena fa vokatra io manadio kalitao amin'ny alàlan'ny pore rehetra ary mampiseho ny asa lehibe vitan'ny ekipa mpamorona ny orinasa britanika.
Hanombohana ny T10 vita amin'ny vy tsy voatsindrona, manolotra endrika mivaingana sy maharitra. Izaho manokana dia efa zatra ilay hoe tsy dia maharitra ihany ny headphones fa amin'ny tranga RHA T10 dia afaka manome toky aho fa manana tadiny lava izy ireo.
Ny ankabeazan'io fanoherana io dia avy amin'ny tariby varahina vita amin'ny volo izay manome fanoherana mahavariana ary tena mahafinaritra ny mikasika. Ankoatr'izay, ny nanesoran'izy ireo ny oxygen tao anatiny dia mamela ny zava-misy izay tiako: tsy mila miahiahy momba ny horonan-tsarimihetsika ianao. Eny, matotra izany, tsy azo atao mihitsy ny mijaly amin'izany olana izany amin'ny RHA T10.
Ny earphone dia mitarika antsika hametraka azy ireo ao an-tsofintsika mahazo aina izy ireo, Na dia misasatra be aza ianao, mampihatra fanatanjahan-tena ohatra, dia mora ho azy ireo ny mivoaka raha tsy namboarinao tsara, tsy misy tsy voavaha amin'ny fanamafisana tsara ny écouteur.
Ny kinova izay nozahanay toetra dia ny maodely T10i, izay mampiditra fanaraha-maso ny habetsany, na dia natao ho an'ny iOS aza izy io ka tsy mandeha amin'ny laoniny amin'ny fitaovana Android, noho izany dia mamporisika anao aho hahazo ny maodely RHA T10 izay vidiny ambany 10 euro.
Mazava be ny fehin-kevitro: Ny fakan-tsarimihetsika RHA T10 dia misy famaranana kalitao ary ny fananganana azy dia manazava zavatra iray: maharitra maharitra ireo headphones ireo, indrindra raha mihevitra isika fa ny trangam-pitaterana dia ahafahantsika mitahiry tsara kokoa ny fonon-tsofinay, mitondra tela-tsofina roa miaraka amintsika raha sanatria sy ireo sivana. Mahafinaritra azy ireo koa ny mampiasa azy, afaka mandany ora maro hihainoana mozika tsy ho reraka ny sofinao ianao amin'ny zava-mitranga amin'ny telefaona hafa, indrindra raha mampiasa kavina sofina visco elastika ianao.
Eny ary, ny RHA T10 dia manana endrika tsy lavorary ary tena mahazo aina amin'ny fampiasana azy, saingy ahoana ny fandehany?
Araka ny efa nolazaiko, Ny fakan-tsarimihetsika RHA T10 dia misy sivana azo esorina izay ahafahantsika manamboatra ny headphones miorina amin'ny karazana mozika fa hihaino isika. Izy ireo dia mampiditra ireo "variana" "referansa" sy "bas" mahazatra. Tokony holazaina fa ny fanalana ny takelaka sivana voalohany dia fampijaliana, fa raha vao tratranao izany dia mora kokoa ny lalao mihodina sy manala ireo sivana isan-karazany.
Raha ny filazan'ny mpamorona azy dia manolotra a T feo tsy miandany manolotra traikefa mahay mandanjalanja na dia eo aza ny zava-misy dia hitanao fa mifantoka amin'ny fanamafisana ny bas izy ireo. Nandritra ny iray volana no nandramako ireo sivana telo azo, ary raha ny hevitro dia ny sivana "treble" no manome ny traikefa tsy miandany indrindra. Ary andao hatrehana izany, tsy mampahazo aina mihitsy ny manova ny sivana arakaraka izay tiana hohenoina, noho izany dia tsara kokoa ny mamela foana ilay sivana treble satria io no tsy miandany indrindra amin'ny rehetra.
Tena tsara ny feony, na izany aza Amin'ny karazana toy ny vato sy vy, raha tsy mampiasa ny sivana treble ianao dia hijaly noho ny fihenan'ny feo manelingelina Izany dia mampihena ny kalitaon'ny finday avo lenta. Mazava ho azy, fahafinaretana tokoa ny fampiasana an'ireny headphone ireny amin'ny karazana mozika hafa toa ny Hip Hop na koa ny mozika klasika. Na dia marina aza fa misy ny vahaolana voalanjalanja kokoa, toy ny headphones AKG K3003, dia tsy maintsy tsiahivina fa ny tsy fitovian'ny vidin'ny abysmal dia mahatonga ny fahasamihafana.
Izaho manokana dia mieritreritra an'io headphones io RHA T10 dia manolotra feo manara-penitra izay hanome fahafaham-po bebe kokoa ny filan'ny ankamaroan'ny mpampiasa na dia mety mahatsikaritra aza ireo manam-pahaizana amin'ny mozika fa be loatra ny fampiasana ny bas.
Raha raisina ny kalitaon'ny famaranana, ny faharetan'ny vokatra sy ny kalitaon'ny feo, dia heveriko fa ny RHA T10, izay tadidintsika 169 euro ny vidiny , no vahaolana hodinihina. Nahavita asa lehibe RHA ary, raha manohy toy izao izy ireo, dia mety ho lasa benchmark amin'ny indostria.
Ny kalitaon'ny vita dia sarotra ny mampifanaraka amin'ny vokatra an'ity karazana ity
Amin'ny ankapobeny, ny fifandanjana feo dia tena tsara, bebe kokoa raha mandinika ny vidiny isika
Tsy takatry ny paosy rehetra ny vidiny
Feo be loatra ny bas
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Fitaovana hafa » RHA T10, famakafakana iray amin'ny telefaona an-tsofina tsara indrindra eny an-tsena
Mampiroborobo headphones RHA T10 vitsivitsy izahay, hiaraka aminay ve ianao?
Fomba ahazoana tombony betsaka amin'ireo terminal Android antsika ary hahomby sy hanan-tsaina kokoa